कसरी ट्रेस र नतिजा बिना लुगा देखि एक चिल्लो दाग हटाउन
यहाँ, यो बिहान केही मा जस्तो थियो, समस्या छाया, तर सेतो शर्ट मा भोजन घृणित स्थान, पाइन्छ बस पछि तेल sheen अनुसार जो, तपाईं स्यान्डविच भोजन स्मृति मा बायाँ। उसोभए, तपाईं घर, आए रातीको अन्तिम खाना थियो, नुहाउनु लिए, यो छाला मा लागू गर्न, र धमाका क्रीम को एक जार छानिएन - को क्रीम एक महंगा रेशम negligee को दिल मा छ। यो लाजमर्दो हो? शब्द छैन! त्यसैले कसरी चिल्लो लागेको हटाउन लुगा देखि दाग, तर यो स्थायी रूपमा कपडा विरूपित ~ गर्दैन?
संचित छ दीर्घकालीन अभ्यास को छुटकारा रही को विधिहरू त सानो छैन। केही शायद सय जस्तै वर्ष बितिसकेका छन् छ। उदाहरणका लागि, नुन। यो ताजा एक चिन्ह संग छर्कियो भने, र त्यसपछि धीरे soiled स्थानमा कपडा वा स्पन्जले RUB, त्यसपछि बोसो अवशोषण यस प्रकारको मा अवशोषित गरिनेछ। तर, यो प्रक्रिया एक पटक वा दुई पटक भन्दा बढी दोहोर्याउन आवश्यक छ।
त्यहाँ वस्त्र देखि "ड्राई" को तेल दाग हटाउन थप तरिकाहरू छन्। स्टार्च,: यो, हामी निम्न सजिला उपकरण सबै सम्भव सहायता हुनेछ बेबी पाउडर, चीनी, चक, शुष्क तोरी। आफ्नो काम नै यसलाई "blotter" को एक प्रकारको हुन आफ्नो क्षमता आधारित छ।
ब्रान्ड मा नयाँ स्थलहरू अमोनिया को एक समाधान संग प्रभावित हुन सक्छन्। Undiluted पदार्थ प्रयोग यसलाई पानी र डिटर्जेंट यसलाई मिश्रण राम्रो छ, आवश्यक छैन। समाधान एक कपास प्याड, त्यसपछि दूषण ठाउँ सखाप भएको थियो, जो लागू गरिएको छ। को कपडे अन्त्यमा सेतो कपास फलाम को एक टुक्रा द्वारा ironed छ।
वस्त्र देखि चिल्लो दाग हटाउन "smelly" तरिका हुन सक्छ। किन यति अशिष्ट? धेरै peculiar गन्ध मा पेट्रोल किनभने। पनि inveterate समस्या सामना हुनत। तथापि, अक्सर purified उड्डयन इन्धन प्रयोग गर्नुहोस्। को दाग बिस्तारै यसको केन्द्र तेल लेबल को किनाराको देखि परिपत्र आन्दोलनहरु बनाउने, वस्त्र को गलत पक्षमा हुनुपर्छ हटाउन। र पनि पेट्रोल vapors को "खुशबू" मा निसासिने छैन ताकि, यो उपचार पछि कुरा धुन र कुल्ला गर्न निश्चित हुन।
निम्न विधि, कसरी चिल्लो दाग हटाउन वस्त्र देखि, धेरै विदेशी। प्रयोग दाग रिमुभर ... बियर रूपमा। हो, हो! र यो प्रयास गरेका ती, यो विधि धेरै प्रभावकारी छ भन्छन्। तिनीहरूलाई अनुसार, foamy पेय सजिलै लामो समय को लागि कपडा मा बसे जो centenarians, संग सोझो छ। प्रक्रिया आदिम छ र कुनै पनि शारीरिक प्रयास आवश्यकता छैन। हामी बस, को दाग मा एक सानो बियर खन्याउन एक आधा (रह्छ पिउन पर्याप्त) घण्टा, र त्यसपछि prostirnut कुरा प्रतीक्षा गर्न आवश्यक छ।
को बेवास्ता नगर्नुहोस् dishwashing डिटर्जेंट। धूपदान र बर्तन संग तिनीहरूले काँध मा तिनीहरूलाई लुगा मा सामना, यसैले चिल्लो दाग। तिनीहरूलाई कसरी प्रयोग गर्ने? यो पनि कपडा गर्न तरल खन्याउन पाँच मिनेट लागि त्यहाँ छोड्न र त्यसपछि लाँड्री वस्तु पठाउन आवश्यक छ। जटिल, धेरै उन्नत अवस्थामा सम्पूर्ण प्रक्रिया फेरि दोहोर्याइएको छ।
साबुन - र हाम्रो हजुरआमा को बारेमा लामो-खडा सहयोगी को शुद्धता लागि आफ्नो संघर्ष भूल छैन। ओह, यसलाई कसरी थप कुशलतापूर्वक लुगा देखि चिल्लो दाग हटाउन मिति, छ। सबै भन्दा राम्रो परिणाम लागि, नम कपडा मा लुगा धुने अघि, त्यसैले मिनेट पन्ध्र लागि लागू Soapy "टोपी" - बीस। साबुन केही टुक्रा grater मा जमीन छ, moisturize र चिप्स यो स्थान छर्कियो। त्यसपछि वस्तु धोए र चिसो पानी मा कुल्ला छ। बिक्री मा परिचित brusochkov बढि उन्नत संस्करण हो। तिनीहरूले "Antipyatin" लेबल गरिएका छन्।
दाग संग लडाई को गर्मी मा सावधानी बारे मा भूल छैन। नाजुक कपडे लागि बलियो माध्यम प्रयोग छैन र सधैं एक पटक र सबै को लागि कुरा बिगार्छ छैन ताकि, यस्तै अन्तराल मा एक विशेष विधि जाँच गर्नुहोस्।
एक डिस्को केटाहरू र बालिका के लगाउन
छोराछोरीको जूता Geox - गुणस्तर र सौन्दर्य
स्टाइलिश जूता लोयड - आफ्नो छवि लागि विकल्प
एडी संग जाडो जूता
चेरी को एक compote, चेरी नुस्खा, pitted र सुकेको चेरी पात: जाडो लागि हामी पर्खिरहेका छन्
हेलेन Mirren (हेलेन Mirren): जीवनी, Filmography र अभिनेत्री को व्यक्तिगत जीवन (फोटो)
को "Meile" मा मेलबक्स हटाउन कसरी विवरण
कुकुर को नयाँ जातिहरु: विवरण
शास्त्रीय साहित्य (रूसी)। रूसी शास्त्रीय साहित्य: सबै भन्दा राम्रो काम सूची
सुशी कसरी खाना पकाउनु।
एक राइफल संगीन एक प्रोटोटाइप - Bagineti
सरल cardigan केटा कुरा र योजना को विवरण
कसरी राम्ररी बिरालोको बच्चाहरुको हेरचाह गर्न
कानुनी मान्यता को प्रकार